28 000 Ireo Renirano Nanjavona Tamin’ny Sarintany Sinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2013 2:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, বাংলা, Español, русский, Svenska, English
Misy hira “folk” Sinoa iray izay mitantara ny “renirano lehibe manonja mafy, izay itsofan'ny rivotra ny fofon'ny tanimbary mankany amin'ny moron-drenirano.”
Nefa mety ho lasa fahatsiarovana sisa ny renirano mampanonofy toy izany any Sina. Noho ny fitaintainan'ny vahoaka nitombo noho ireo riaka maro voaloto tany amin'ny firenena, nampiseho ny fanadihadiana iray natao vao tsy ela manerana ny firenena fa manodidina ny 28000 ireo renirano voarakitra tao anatin'ny rakitahirin'ny governemanta taloha no ritra.
Ilay fanadihadiana, nivoaka tamin'ny 26 Martsa 2013, no voalohany natao tao amin'ny firenena taorian'ny taona 2010-2012. Araka ny angona natao, miisa 22 909 ankehitriny ireo renirano maharakotra 100km² any amin'ny firenena, izay lavitry ny isa 50 000 nolazaina fa nisy tamin'ny taona 1990.
Sarin'ny fanadihadian'ny CCTV momba ny renirano iray ritra tany Guizhou.
Herinandro maromaro taorian'ny nanaovan'ny fitantanana Sinoa vaovao fanamby ny hiady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana any an-toerana izay vao nivoaka ity fanadihadiana ity. Nahavalaketraka ny maro izany antontan'isa mitontongana izany, anisan'izany ny manampahaizana momba ny tontolo iainana malaza iray, Ma Jun. Tanaty fanadihadiana iray nataon'ny Times of England, nilaza izy fa mifandray amin'ny fitrandrahana diso tafahoatra ny rernirano izany fanjavonan'ny renirano izany.
Nanampy koa i Ma fa mety manana anjara amin'izany koa ny tetikasa “hydroélectrique” goavana tahaka ny Tohodranon'i Three Gorges.
Na izany aza, nandiso ilay isa ambany ny governemanta indrindra indrindra momba ireo fomba fikarohana samihafa sy ny fikorontanan'ny toetr'andro. Jiao Yong, solombavambahoakan'ny Sina ao amin'ny ministeran'ny rano, dia nanamarika fa tsy azo antoka ny isa 50 000 taloha satria nampiasa ny fomba tranainy ireo mpanao saritany teo aloha mba hijerena ny misy ireo renirano. Nilaza [zh] izay tamin'ny fahitalavi-panjakàna Televiziona Foiben'i Sina (CCTV):
Tamin'ny taona 1990, niankina tamin'ireo sarintany taloha sy ireo fitaovana tranainy ireo manampahaizana mba hanaovana ny kajikajy, fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia nampiasa ireo saritany farany indrindra miaraka amin'ny maridrefy nasionaly 1/50000, ary ny fitaovana fijerena sary alavitra, ka nanisa ireo renirano tsirairay, noho izany dia tokony ho azo antoka lavitra izy.
Maro ireo mpampiasa aterineto no toa resy lahatra amin'ny fanazavàna ofisialy. Yami Laoliu [zh] avy any Beijing dia nanoratra tao amin'ny vohikala fitoraham-bilaogy bitika malaza, Sina Weibo:
Gaga aho raha nahare fa 28 000 sahady ireo renirano nanjavona tamin'ny sarintany. Loza voajanahary ve izany? Sa vokatry ny hadalàn'ny olombelona? Mino aho fa nanana anjara tao izy roa ireo, ka ny hadalan'ny olombelona no tena mibahana, maro ireo ohatra afaka mampiseho izany. Mampiahiahy ny rano sisa tavela sy ny rano ambany tany….Miankina betsaka amin'ny fanafarana avy any ivelany ny sakafo sy ny angovontsika, midika ve izany fa mety hanafatra ny rano hosotroiny koa ireo andian-taranaka any aoriana?
Wang Xuming, mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Fampianarana teo aloha, dia nanolotra [zh] tenim-pahendrena ho an'ny Filoha sinoa Xi Jinping tao amin'ny Weibo:
Torohevitra ho an'ny sefo Xi: Araka ny voalaza dia nihena 27 000 ny isan'ireo renirano maharakotra 100km² tao anatin'ny 30 taona farany teo. Mitombo ny vola anatin'ny paosintsika, fa mihena tsikelikely kosa ny rano manodidina antsika. Nitombo 18,8% ny vola ampiasain'i Sina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, izay avo roa henin'ny fitomboan'ny toekarem-pirenena [manodidina ny 8% ny PIN an'ny Sina. Manoro [ny governemanta] aho mba hampiadana kokoa ny fivoaran'ny toekarena amin'ny lafiny rehetra, ary hanao ny fiarovana ny tontolo iainana ho laharam-pahamehana voalohany, raha tsy izany dia tsy tokony hasiana vidiny ireo mpiasam-panjakàna. Hanao ny Sina manan-karena ho tonga Sina tsara tarehy.
Pan Wenda, izay avy amin'ny tanànan'i Shenyang any amin'ny faritra Liaoning any avaratra atsinanan'i Sina, dia nanao antso [zh] ho an'ny vahoaka ka mangataka ireto farany haneho hevitra momba ny toetry ny renirano any amin'ny tanàna honenany tsirairay avy:
Ireo renirano mandalo amin'ny firenentsika, 27 000 tamin'ireo no nanjavona tao anatin'ny 20 taona, mampatahotra izany tarehimarika sy tranga izany, ny rano no fototry ny aina, raha tsy misy rano dia tsy hisy aina intsony! Mba hampihenana sy hisorohana ny fanjavonan'ny renirano noho ny ataon'ny olombelona, mba hahazoana antoka fa ho salama lalandava ireo zanatsika, ndeha hanandra-peo ka hijery akaiky ireo antoko politika lehibe. Ry namana, mamelà hafatra eto ka hazavao ny toetr'ireo renirano any amin'ny firenenao.
Na ilay gazety mpanaitaitra be mpanaraka tohanan'ny fanjakàna, Global Times aza dia nisento [zh] tamin'ity indray mitoraka ity tao amin'ny pejy Weibo an'ny famoahan-dahatsorany Sinoa:
Voalaza fa an'aliny maro ireo renirano manjavona isan-taona aty China. Izany dia mampahatsiahy ny ala nokapaina tany Yunan tamin'ny taon-dasa, tendrombohitra miboridana: Tany Xishuangbanna, nafindra toerana avokoa ireo hazobe teo mba hambolena hazo fingotra, manimba be ny tontolo iainan'ny ala ny “homogeneisation”. Natomboka ny fampivoarana iray, hipoitra tsikelikely ny lafiratsiny, ary hihazakazaka izany. Nefa iza no afaka manameloka ireo ezaky ny olombelona amin'ny fanatsaràna ny toe-piainana? (Raha) misy olona iray lavitrisa donton'ny fampivoarana ka tsy ampy finoana sy fahatahorana ny natiora, tsy ho tanjaka mampihorohoro ve izany!